Ruvara Coated Steel Plate
Kugutsikana Kwenyu, Basa Redu
Inopa Wide Range yeZvigadzirwa
Pre-painted galvanized simbi pepa coil PPGI co...
1050 1060 1100 3003 Aluminium Sheet Denderedzwa / Ro...
Big Zero Spangle Yekunze Masvingo Inopisa Yakanyura Gal...
Tikugashirei kuKambani Yedu
Isu tiri mutengi-anotungamirwa nevatengi, anovandudza uye anotyairwa-anotyairwa ekugadzira mutengesi uye mutengesi weRaw zvinhu zvakagadzirwa muChina.
Isu takamiririra China Mill seBaosteel, Ansteel uye imwe yakazvimirira simbi kambani inotengesa inotonhora Rolled Steel sheet coil / SPCC, Galvanized simbi sheet coil / SGCC, Galvalume simbi sheet coil / Aluzinc simbi coil, Pre-painted Galvanized simbi coil / PPGI, inotonhora yakakungurutswa Kwete. zviyo Oriented simbi / CRNGO, uye aruminiyamu sheet coils.
Hatisi kungotengesa zvinhu zvesimbi chete asi tinopawo tsika yekutsvagisa sevhisi kubva kuChina
Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd. inotungamira yakazara yakazara simbi inogadzira muChina.
Brazil inowedzera AD kuferefeta pane inotonhora-r ...
Sekureva kwegwaro rakabva kuBrazil's Secretariat of Foreign Trade (SECEX), Brazil yakasarudza kuwedzera kuferefetwa kweapo-anti-dumping (AD) matanho ekutengesa kunze kwe304 inotonhora-yakakungurutswa simbi isina tsvina masheets anobva kuIndonesia nemwedzi mitanhatu kubva Chikumi 2 gore rino. .Pane zvakakwana evi...
Alcoa yekudyara madhora 51 miriyoni mukuwedzera ...
Alcoa Corp., inotungamira aruminiyamu mugadziri muUS, yakazivisa Chitatu chino (Chikumi 15) kuti ichaisa mari inosvika US$51 miriyoni pachinyungudutsa chayo cheMosjøen muNorway kuti iwedzere huwandu hwegore hwekugadzira nematani zviuru gumi nezvina.Iyo nameplate simba reMosjøen smelter parizvino 200,000 matani pagore.Wi...